मन्त्री बाँस्कोटाबारे बालुवाटारमा छलफल, राजीनामाको सम्भावना कति ? – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार २०:०९ English
मन्त्री बाँस्कोटाबारे बालुवाटारमा छलफल, राजीनामाको सम्भावना कति ?
काठमाडौँ, ८ फाल्गुण । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिशन माग गरेको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ । उनको राजीनामाबारे नेकपाका शिर्ष नेताबीच बालुवाटारमा छलफल भएको हो । अडियो रेकर्ड भाईरल भएपछि नेकपाका शिर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफलमा जुटेका हुन् ।
स्रोतले मन्त्री बास्कोटाको राजीनामा आउने सम्भावना रहेको बताएको छ । मन्त्री बाँस्कोटा भने बुधबार महेन्द्रनगरमा सुरु भएको सुदूरपश्चिमाञ्चल औद्योगिक व्यापार मेला तथा कञ्चनपुर पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्न कञ्चनपुरमा छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले पनि मन्त्री बाँस्कोटालाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गरी छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेको छ ।
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ११:२६ मा प्रकाशित
महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त	२४ चैत्र २०७६, सोमबार १६:५०
१९ दिनमा ६१ हजार नेपाली स्वदेश फर्किए, कुन देशबाट कति ?	२४ चैत्र २०७६, सोमबार ११:२२